Ihowuliseyili nut yobisi lokucoca ulwelo abenzi kunye nabathengisi | Isihluzi seRiqi
Sivelisa ikakhulu ukuthengisa ibhegi yenayiloni yokuhluza ukutya, iingxowa zokucoca ezicocekileyo zecotton kunye neengxowa zamanzi zamanzi.Njengomvelisi, siqinisekisa umgangatho kunye nenkonzo yasemva kwentengiso yeesampulu zethu.Iisampulu zasimahla, iikowuteshini ezifanelekileyo nezikhuphisanayo ziyafumaneka.
Isixhobo: IBakala lokutya kwi-100% yeNylon / ipholiyesta
Ukuthengisa ubungakanani beMesh obushushu: 50um, 75um, 100um, 120um, 200um okanye ngentando yakho
Ukucaciswa kwamageneral: 12 “x12 11, 11“ x16 “, 10“ x12 ″, 26 ″ x22 “or customized
Isetyenziselwa ikakhulu: ukwenza ubisi lwekernel, incindi yeziqhamo, incindi yemifuno, ubisi lweembotyi zesoya, iti, ikofu ebandayo, iwayini, ubusi, ukuphisa ibhiya kunye nokunye ukuhluza.
1. Ibhegi yokutya yenayiloni ekumgangatho wokutya, umnatha ocoliweyo, akukho lula ukuyivimba, ulwelo lokucoca ulwelo.
2.inokusetyenziswa kwakhona, kulula ukuyicoca.
3. Iimveliso ezigqwesileyo kunye nexabiso eliphantsi.Njengomvelisi, sinokunikela ngamaxabiso okhuphiswano.
Kufanelekile ukuba ukuhluza erhabaxa, amasuntswana ukuhluza ulwelo enkulu, abasebenzisi abafuna ukwenza ukuhluza yesibini, ungakhetha 60 umnatha ukuhluza kuqala.
Faka isicelo kubusi, ubisi lweembotyi zesoya ezenziwe ngesandla, okanye umatshini weembotyi ezaphukileyo, uncamathiselo lweembotyi nokunye ukuhluza, kufuneka iingcebiso ezibuthathaka ngakumbi zikhethe i-120 mesh.
Iye yakwazi ukuhlangabezana nohluzo lwasekhaya, ubisi lweembotyi eziphekiweyo zesoya, incindi yeziqhamo, ijusi yemifuno, iviniga yeziqhamo, amayeza amaTshayina kunye nezinye iziselo ezenziwe ekhaya.
Ubisi lwe-soy eluhlaza, iti yobisi, ikofu, iti, njl.
Imbonakalo-mhlaba, ubisi, iwayini, iwayini etyheli, njl.
Yeyomnatha ocociweyo ocoliweyo, i-slag amagama amaninzi, xa isantya sokuhluza siza kuhamba kancinci, ngaphandle kokuba USETYENZISA inombolo encinci enemigca yokuqala ukucoca ulungele utywala, utywala obunokutyiwa njalo njalo.
Egqithileyo enemingxunya yecebo lokucoca ulwelo
Okulandelayo: ingxowa rosin